Kora ABO Kutaa Kanaadaa (Garee J/Kamaal Galchuu) -
bilisummaa April 17, 2015	Leave a comment
ABOn B/General Kemal Galchuun hooganamu Caamsaa 16-17, 2015 biyya Kanadaa, magaalaa Calgary keessatti kora isaa kan waggaa odhachuudhaan miseensotaa fi uummata Oromo waliin dhimmoota Qabsoo Bilisummaa Oromo irratti maree deemsisuuf saganteefatee jira.
Walgahii kana irratti hoganotin ABO B/G/Kemal Galchun hooganamu argamuudhaan dhimmota fardiii ta’an ( policy issues) kan akka Sagantaa Siyaasaa, kaayoo masakaa, tooftaa fi tarsiimoo qabsoo, tokkummaa qabsaayota Oromo kan kana fakkaatu irratti miseesotaa fi hawaasa Oromo waliin maree bal’aa deemsisuuf jiraatu. Kanaaf, Oromoonni adeemsa kaayoo, Sagantaa Siyaasaa fi Tooftaa fi Tarsiimoo QBO –tan ABOn hooganamtu irraa gaafii, yaadaa fi yaaddoo qabdan hundi akka maree kana irraa qooda fudhattan kabajaa fi Jaalala Oromummaa waliin isin afeerra.
Caamsaa 16, 2015 – guyyaa Walgahii Hawaasaa, Caamsaa 16, 2015 – galgala sagantaa bashannanaa kan Artistonni Oromoo beekamoon irraa qooda fudhatan fi Caamsaa 17, Walgahii Miseensota ABO Kutaa Kanaadaa
Teesson – 167 Temple Community Center
Caalatti Hubachuuf lakkoofsa bilbilaa asii gadii dhawaa.
Obbo Qasim Barro – 587 700 1462, Obbo Husseen Fatoo- 403 903 4863,
Obbo Gammachuu Gole – 403 890 7617
Tags Abo Kamaal Galchuu OLF
Previous Xenophobic riots in South Africa
Next The Oromo People’s right to independence can not be achieved by a fake Election that Ethiopia prepares and controls